Indoda iqila inkampani yensimbi US$9 000 | uMthunywa
Indoda iqila inkampani yensimbi US$9 000
09 Sep, 2021 - 00:09 2021-09-08T19:40:06+00:00 2021-09-09T00:03:00+00:00 0 Views
KULENDODA yakoBulawayo etshiye izisebenzi zenkampani yePanel Link eKelvin koBulawayo zididekile kulandela ukutshontshela inkampani le insimbi ezithengisayo ngokuguqula lokho ayabe ekubhadalele afake okunye.
Undoda lo okubikwa wafika enkampanini le wabhalisa ukuthi unguMoyo nje kuphela, wathenga insimbi uthe esesiyazithwala wasengezelela inani.
Isikhulumi samapholisa akoBulawayo uInspector Abedinico Ncube uthe kulendoda eyenze ubuqili yatshontshela inkampani yePanel Link imali engaba yi-US$9 000.
“Kulenkampani etshontshelwe imali ngobuqili ngenye indoda okuthiwa nguMoyo efike yathenga ama 0,1×12mm by 6m ama-deformed sheets abeyi-US$4,50 yena watshintsha kwaba ngama-441 ×12mm×6m kwaba yi440 sheets.
“Ngosuku olufanayo waphinda wabuyela wafika wathenga insalela zezinsimbi ezingama- 0,1×12mm×6m watshintsha kwaba yi-1514 okwaba yi-1 573 sheets.
U-Insp Ncube ukhuthaze amankampani ukuthi aqaphele amaqili kumabhizimusi abo ngokusebenzisa indlela ezingeke zasetshenziswa ngamasela ukutshontsha.